YEYINTNGE(ကနဒေါ): ဆရာတော်နှစ်ပါးအကြား အပြန်အလှန် ပြန်ကြားစာများမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းထန်လာ
ဆရာတော်နှစ်ပါးအကြား အပြန်အလှန် ပြန်ကြားစာများမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းထန်လာ
ဆရာတော် ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်)၏ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာတော် ဦးဇ၀န (နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း)မှ လူမှုရေး စာမျက်နှာပေါ်တွင် ထောက်ပြမိန့်ကြားခဲ့ရာမှ ဆရာတော် ဦးဇ၀နနှင့် ဆရာတော် ဦးဝီရသူတို့၏ အပြန်အလှန် ပြန်ကြားချက်
“ညီမောင် ဦးဇင်းဝီရသူထံ အရှင်ဇ၀န (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) မှ မေတ္တာဖြင့် ပြန်ကြားခြင်း”
ဝေဖန်တာလား အပြစ်ပြောတာလားဆိုတာ လက်ခံရယူသူရဲ့ ဓာတ်ခံနဲ့သာဆိုင်တဲ့ကိစ္စမို့ ဒီစာကို ညီမောင် ရှိပြီးသား ဓာတ်ခံပေါ်ကနေပဲ လက်ခံရယူပါ။ ညီမောင့်မှာ လုပ်ရဲကိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားနေတဲ့ကိစ္စ အထွေအထူး မပြောတော့ပါဘူး။ ညီမောင့်သတ္တိကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချစေချင်လို့ အချိန်နှောင်းသော်လည်း အချိန်မှီလောက်မယ်ထင်လို့ ဒီစာကိုပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သားတွေက အာဏာရှင် လက်အောက်နေလာခဲ့ရတာ ကြာတော့ အတိုက်အခံဆိုတာနဲ့ မယဉ်ပါးကြချိန်မှာ တခုခုပြောရင် ဝေဖန်တယ်လို့မထင်၊ အပြစ်ပြောတယ်ထင်ပြီး တုန့်ပြန်တတ်ကြအထဲ ညီမောင် မပါဝင်တာ ဝမ်းသာတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ အတိုက်အခံက ပြောတာကို ပြန်ငြင်းချင်ငြင်းမယ်၊ သူတို့ပြောတဲ့ စကားက ဒီအတိုင်းအတာအထိ ငါ့ကိုပြောနေတာ ဘယ်လို ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့်ဆိုတာ ပြန်ရှာကြ မှန်နေရင် လမ်းကြောင်းအသစ်ရွေးကြနဲ့ -အခုလည်းညီမောင် ပြန်ငြင်းပါ -ပြီးတော့ ဟုတ်မဟုတ် စဉ်းစားတာလောက်လေး ညီမောင် လုပ်မိတယ်ဆိုရင်တောင် ဒီစာရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။ အခုစာကို ရေးရတာဟာလည်း အမုန်းခံပြီး ရေးတာပါ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် တခုမှမပါပါ။ မြန်မာလူထုအားလုံး စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားမှု အောက်က အမြန်လွတ်ဖို့ တခုပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထောင်က ထွက်လာပြီးချင်းချင်းမှာ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုတာဆိုလို့ မဟန ဆရာတော်တွေထဲက ဆရာတော် ဦးတိလောက တပါးတည်းသာ ရှိပါတယ်။ ဆရာတော် ဦးတိလောကကို ဆရာတော်ရဲ့ အမျိုးချစ်စိတ်ကို သံသယမရှိဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပြီးသားပါ။ ဆရာတော်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို အမြဲအမှတ်ရနေပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုလေးစားလို့ အရာအားလုံး သဘောတူရမယ် ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ သီလသမာဓိ ဆရာတော်ရဲ့ အမျိုးချစ်စိတ်ကို အားယူပြီး အမုန်းတွေ ဟောပြောနေတဲ့ နောက်ပါ တချို့ရဲ့ ဟောပြောနေမှုကြောင့် အားလုံး သဘောမတူသင့်ဘူးဆိုတာ ထင်ရှားလာတယ်။ (တချို့ သံဃာတော်တွေဟာ ထိမ်းသိမ်းရ ခက်တယ်လို့ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ညည်းတွားတာ အတွင်းစကား ကြားရပါတယ်)။ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စမှာ တသွေမတိမ်း လိုက်နာဖို့ အဆင်သင့်ရှိပေမယ့် ဆရာတော် မကျွမ်းကျင်တဲ့ နယ်ပယ်အလုပ်ကို အားလုံး သဘောတူလို့တော့ ရမယ်မထင်ပါဘူး။ အခုဖြစ်နေတာက ဥပမာ ပုံစံတခုပြရရင် အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ နဂါးမင်းဟာ သူ့ဦးခေါင်းလေး ရွှေ့လိုက်တာ မသိသာလှပေမယ့်၊ နောက်ပိုင်းက သူ့တကိုယ်လုံးရဲ့ အရွေ့က ဦးခေါင်း ရွေ့တာထက် အများကြီး အရှိန်ပိုပြင်းတယ်ဆိုတာ သိမှာပါ။ ဆရာတော် တပါးတည်း ကိစ္စက ပြောစရာမရှိပါ။ နောက်ပါ အချို့ကြောင့် လူအမြင်စောင်းတဲ့ဖက် ပိုပိုရောက်တာပါ၊ ရိုးရိုးသားသား အမျိုးချစ်သူများကို လေးစားပြီးသားပါ။ အမျိုးချစ်တာကို ရှေ့တန်းတင် အာဏာရှင်အတွက် စည်းရုံးရေးမှူးတွေအဖြစ် ပါဝင်နေသူ တချို့ကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးချစ်စိတ် တခုတည်းနဲ့ အမှန်တရားကို တည်ဆောက်လို့ မရတာကတော့ လူ့သမိုင်းတွေက သက်သေခံ နေပြီးသားပါ။ အမျိုးသားရေး အမြင်တခုတည်းနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးတောင် ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ သတ္တလောက တခုလုံးအတွက် ပွင့်ပေါ်လာရတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အမျိုးစောင့်ရှောက်မှုဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက် အယူရှိသူကို သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ ထောင်ချပစ်ဖို့ ရန်သူလို သဘောထားဖို့ မဟုတ်တာ အထူးပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ တဦးချင်း လွတ်မြောက်ရေးမှာ အတ္တပေါ် အခြေခံတဲ့ အမြင်ရှိလျှင်တောင် ဗုဒ္ဓက ဖယ်ရှားခိုင်းနေတာမို့၊ အမျိုးဘာသာ ကိစ္စမှာ ငါ့အမျိုးမှ အမျိုးဆိုတဲ့ အတ္တအားကြီးသူတွေကို အားပေးမယ် မထင်ပါဘူး။ တချို့လူတွေက သိင်္ဂါလ သတိုးသားကို ဟောကြားခဲ့တဲ့ စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ သားသမီးကျင့်ဝတ်ကို အကိုးအကားလုပ်ပြီး ငါ့အမျိုးမှ ငါ့အမျိုး လုပ်ချင်ကြတယ်။ သိင်္ဂါလကို ဟောခဲ့သလို သာကီဝင် ဆွေတော် မျိုးတော်တွေ အမျိုးဂုဏ် ထောင်လွှားလို့ တန်ခိုးပြဋိဟာ ပြပြီးဆုံးမခဲ့တာကိုတော့ လျှစ်လျှူရှုထားကြတယ်။ အမုန်းစကားတွေနဲ့ ဟောပြောပြီး တဖန် ငြိမ်းချမ်းရေးပါလို့ ပြောနေတာ မငြိမ်းချမ်းဘဲ မီးတောက်တွေသာ ပွားနေပါလိမ့်မယ်။ ညီမောင်ရေ..၊ တပည့်တော်တို့ သံဃာထုအနေနဲ့ မကြာခင်က ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းရေး ခြေလှမ်းများကို သတိထား စောင့်ကြည့်ပြီး ကန့်ကွတ်သွားရမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းမှုတွေက ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို ရောသမမွှေပြီး ပိုမိုရှုတ်ထွေးအောင်လုပ်ဖို့ ကြံစည်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေနဲ့ လမ်းပြောင်းဖို့ ကြံစည်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို ရောထွေးမှုက တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲ ဆွဲချဖို့သာ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာရော ကမ္ဘာမှာပါ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ရောထွေးမှုကြောင့် ကောင်းကျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ခါးသီးမှုတွေသာ ကြုံခဲ့ကြရတယ်။ တပည့်တော်တို့ သံဃာတွေအနေနဲ့ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ သာသနာ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဖြစ်တယ်။ သာသနာ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အစိုးရရဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ရောထွေး အသုံးချမှုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင် သွားရမှာပဲ ဖြစ်တယ်။ ညီမောင်ဘုရား.. ၊ မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်ကြီးဆိုတာ မြန်မာ့ သာသနာ သမိုင်းမှာကော ခေတ်သစ် သမိုင်းမှာပါ အံမခန်း တောက်ပြောင်ခဲ့ တောက်ပြောင်နေတယ် ဆိုတာ အထင်အရှားပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ရန်လို အမုန်းစကားတွေကြောင့် ရန်ပွဲတွေ တခြိမ်းခြိမ်း ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ ဒီမစိုးရိမ် နာမည် ကာဗာခုတုံးလုပ်ပြီး ဟောသမျှ ပြောသမျှ လုပ်နေတာဆိုလျှင် လူတွေက မစိုးရိမ် သံဃာအားလုံးရဲ့ သဘောထားလို့ ထင်နေတော့မှာ သေချာပါပဲ။ ကိုယ်က တသီးတခြားစီဆိုတာ ထင်ရှားအောင် မပြလျှင်တော့ လူတွေဆိုတာ ၀ီရသူနဲ့ မစိုးရိမ် ရောထွေးမြင်မှာ တွေးမှာပါပဲ။ မစိုးရိမ်တိုက်ဟာ မြန်မာသာသနာ့ သမိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့ တိုက်ဖြစ်လို့ ညီမောင်ရဲ့ အစွန်းရောက် တရားတွေ ပြောဆိုပြုမူမှုတွေ၊ အစိုးရ အားရအောင် လုပ်မှုတွေဟာ တိုက်ကြီး သိက္ခာကို ထည့်တွက်သင့်တယ်။ ညီမောင် လုပ်သမျှကို မစိုးရိမ် တတိုက်လုံးက သဘောတူနေပြီလား ။ တခြားအကောင့်တွေ ကြေငြာချက်တွေမှာ ညီမောင်နဲ့ သဘောထား ကွဲလွဲသော အမြင်များကို တွေ့နေရလို့ မေးတာပါ။
ပိုထင်ရှားတာက မကြာခင်က မောင်သွေးချွန် ဟောပြောပွဲကို တိုက်မှ ဘယ်အတိုင်းအတာနဲ့ ခွင့်ပြုခဲ့သလဲ ဆိုတာက အဖြေပါ။ (မောင်သွေးချွန်ဆိုတာလည်း စာပေနယ်မှာ သိက္ခာမရှိ လူရာမသွင်းတဲ့သူကို တကယ့် ပညာရှိကြီး ထင်ပြီး ကိုးကွယ် နေကြတယ်လို့ ပြောဆိုစကားတွေ ၊ ကိုယ်ရထားတဲ့ ဘွဲ့ကိုမှ အားမနာလို့ ရှင်လူတွေက ပြောနေကြတာ ညီမောင် ကြားမိပါစ။) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်မသ်ိကြသူတိုင်းက ညီမောင်ပြောသမျှ ဟောသမျှ အားလုံးဟာ မစိုးရိမ် သံဃာအားလုံးရဲ့ အမြင်သဘောထားလို့ပဲ ထင်နေဦးမှာပါပဲ။ ညီမောင်က “ချစ်သူကို အားမကိုးရရင် အားကိုးရသူကိုပဲ ချစ်မှာပါဘုရား” - ဆိုပြီးပြောလာတော့ စစ်တပ်ကို လော်ဘီလုပ်နေတာ အထွေးအထူး ရှာစရာ မလိုတော့သလို ဖြစ်သွားပါပြီ။ အခု ချစ်သူကကော တကယ်အားကိုးရသူ အစစ်လား၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက်ကို ပြောတာပါ။ သံဃာတွေ ဝရမ်းထုတ် ထောင်ချ ဘုရားဖြို ကျောင်းဖျက် တာလီဘန်နဲ့ တတန်းထဲရှိတဲ့ သူတွေကို မဘသတွေက အားကိုးရုံတင်မဟုတ် တာလီဘန်တွေက အမျိုးသမီးတွေကို ကန့်သန့်ချုပ်ချယ်တဲ့ အမှုမျိုးလို ဦးသိန်းစိန် တာလီဘန် အစိုးရလက်ထဲ ဥပဒေပြုဖို့ ဝကွက် အပ်လိုက်တာကတော့ တာလီဘန် နိုင်ငံအဖြစ် အတင်း တည်ဆောက် ခိုင်းတာနဲ့ မတူနေဘူးလား ဘုရား၊ တကယ့် မျောက်လက်ထဲ မီးဒုတ်အပ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စစ်တပိုင်း အစိုးရကတော့ ၂၀၁၅ အတွက် အရှင်ဘုရားများကို အားကိုးမှာပါ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ရည်ရွယ်ချက် မပျောက်ကြပါ။ သူတို့လုပ်ရမည့် ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ရေး ကိစ္စကနေ တဆံချည်မရွေ့ ဦးတည်ချက် မပြောင်းကြပါဘူး။ အမျိုးသားရေး ပြောလိုက်၊ တမျိုးသားလုံးကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ကိုပဲ အားကိုးရမယ်လို့ ဟောပြော လိုက်လုပ်နေတဲ့ ညီမောင်တို့သာ လမ်းပျောက်နေတာပါ - ကိုယ်တွေကတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ရေး ဆန့်ကျင်တာကို တသဘောထဲ မကွဲမပြား သဘောတူပြီးသားပါ။ ကျူးကျော်သူတွေကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ် အတင်းလက်ခံခိုင်းသူ မှန်သမျှကိုလည်း အများနဲ့နည်းတူ တက်တက်ကြွကြွကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာပါ - ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ရေး ဆန့်ကျင်တာနဲ့ တပြည်လုံးရှိ မွတ်စလင်တွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ဆိုတာကတော့ သဘောမတူနိုင်ပါဘူး။ ဒီပွဲတွေစရာကနေ ဒီဇာတ်ရှုပ်ကြီးက ဖြစ်လာတာပါ။ ကုလားမုန်းတာ တခုတည်းနဲ့ ကုလားကို ဆန့်ကျင်တာ တခုတည်းနဲ့တော့ အမျိုးသားရေး ဆိုတာကြီးကို မအော်ပါနဲ့။ တမျိုးသားလုံး ငတ်ပြတ် သေကျ -ဘာသာ-သာသနာဖျက်ခံ နေရတာတွေဟာလည်း အမျိုးသားရေးပါ။ လက်ပံတောင်း တောင်က လယ်တီသိမ်၊ ပျဉ်းမနားက ကျောင်းအဖျက်ခံ ထောင်ချခံ ဝရမ်းအထုတ်ခံ သံဃာတွေရဲ့ အရေးဟာလည်း အမျိုးသား အရေးပါပဲ။ နိုင်ငံခြားထွက် မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ ကျွန်ခံနေရတာလည်း အမျိုးသားရေးပါပဲ။ နောက်ပြီး စစ်တပ်က အဓမ္မ မုဒိမ်းကျင့်နေတဲ့ အမှုနဲ့ ကုလားမုဒိမ်းအမှု ဘယ်က ပိုများတယ်လို့ကော စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်ဖူးလား။ ဒီကိစ္စ အားလုံးရဲ့တရားခံက စစ်တပ်ပါ။ ဒီတော့ စစ်အာဏာရှင် တည်တန့်ရေး - လုပ်တာဟာ - အာဏာရှင် ဖယ်ရှားလိုသူတွေက်ုိ် အဟန့်အတား လုပ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ၊ အကုသိုလ် ဒုစရိုက် အမှုကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် လုပ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို အားပေး အားမြှောက် ပြုသူဟာ အလိုတူအလိုပါပါပဲ။ တပည့်တော်ကတော့ ရာစုဝက်ကျော် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ တလျှောက်လုံး လိမ်ညာကောက်ကျစ်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည် အတွက်ကော အမျိုးဘာသာ သာသနာ အတွက်ကော စစ်တပ်ကို ယုံကြည်လို့ မရသေးတာကတော့ ခွင့်လွတ်ပါ။ စစ်တပ်မှတပါး စစ်သား အသွင်ပြောင်း မဟုတ်တဲ့ အရပ်သား ဒေါ်စု မကလို့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံပါတယ်။ သူတို့က ဥပဒေအရ ဖြစ်စေ လူထုမကြိုက်ရင် ဖြစ်စေ ဆင်းပေးကြမယ်ဆိုတာ ယုံလို့ပါပဲ။ မဘသတို့ရဲ့ မျိုးစောင့် ဥပဒေကြောင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးမှု ရ-မရ ဆိုတာကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ အသံနားသာ ထောင်ကြည့်ပါ။ ဒီစာရေးတာ အမုန်းနဲ့ ရေးတာ မဟုတ်ပါ။ အမုန်းခံဖို့ ရေးတာပါ။ ဒီအမြင်ကြောင့် ဒီလိုကန့်ကွက် ရတယ်ဆိုတာ သိရအောင်ပါ။
မေတ္တာဖြင့် အရှင် ဇ၀န (နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း)
“ဆရာတော် ဦးဇဝနသို့ ပြန်ကြားချက် - (၂)” - ဆရာတော် ၀ီရသူ (မစိုးရိမ်)
၁။ “ဘုန်းကြီးဘုရား ညီမောင့် သတ္တိကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချစေချင်လို့ ဒီစာကိုပြန်ပါတယ်”
တပည့်တော် သတ္တိနဲ့ တပည့်တော် အတ္တကို တစ်မျိုးသားလုံး အတွက်၊ တစ်သာသနာလုံး အတွက်၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အတွက်၊ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနေတာ မဟုတ်ဘူးလား ဘုရား….? ။
၂။ ပြည်သူတွေ အတိုက်အခံ ဆိုတာနဲ့ မယဉ်ပါးတာကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ် ဘုရား၊
အတိုက်အခံ ဆိုသူတွေကကော အတိုက်အခံနဲ့ ယဉ်ပါးနေကြပြီလား ဘုရား။
ဘုန်းကြီးတို့ နိုင်ငံရေး လောကသားတွေကို အတိုက်အခံနဲ့ ယဉ်ပါးအောင် အရင်ဆုံး သွန်သင် ပေးစေလိုပါတယ် ဘုရား။
ဝီရသူကတော့ အပြုသဘောဆောင်လာရင် ကုလားပေးတဲ့ အကြံဥာဏ်ကိုတောင် လေးစားပြီးသားပါ ဘုရား။
လက်ညှိုး နဲ့ လက်ခုပ်၊ လက်အုပ် နဲ့ လက်သီးကို တူညီသော လောကဓံအဖြစ် ရှုမြင်ထားသူပါ ဘုရား။
၃။ “မြန်မာလူထုအားလုံး စစ်တပ် ထိန်းချုပ်ထားမှုအောက်က အမြန်လွတ်ဖို့ တစ်ခုပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်”
ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းပါတယ် ဘုရား။
သေနင်္ဂဗျူဟာအရ စနစ်တကျ ဆုတ်ခွာနေတာကို ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက်ရင် ရလဒ်ဆိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုလဲ တွက်ထားပါဦး ဘုရား။ ဦးတည်ချက် မှန်ပေမယ့် နည်းလမ်း မမှန်ရင်လဲ အဖြေဟာ ကျေနပ်စရာ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ ဘုရား။
၄။ “ဆရာတော် ဦးတိလောက ဦးဆောင်လို့ အမှန်တရား ဖြစ်မယ်လို့ မယုံကြည်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပါဦး ဘုရား။
ဘုန်းကြီး ဦးဆောင်လို့ အမှန်တရား ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ဘုန်းကြီးကို ခေါင်းဆောင် တင်ပါ့မယ် ဘုရား။
အဖွဲ့သား တချို့တလေ အတွက်နဲ့ ဆရာတော်ကြီးကို ပြစ်မှားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ဘုရား။
မကြိုက်တာတွေ့ရင် သံသယရှိရင် ဆရာတော်ကြီးကို တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ် ဘုရား။
၅။ “အမျိုးချစ်တာကို ရှေ့တန်းတင် အာဏာရှင် အတွက် စည်းရုံးမှူးတွေ အဖြစ် ပါဝင်နေသူ တချို့ကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်”
အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တွင်တွင်သုံးပြီး အမုန်းတရားတွေကို ဖြန့်ချီနေတာ အချင်းချင်း အိုးမဲသုတ် ခွပ်ခိုင်းနေတာတွေက ဘုရား အလိုကျပါ့မလား ဘုရား။
ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ ဝါဒီတွေထဲမှာ ဘုန်းကြီးလဲ ပါသွားမယ်နော်။
၆။ အမျိုးချစ်စိတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ အမှန်တရားကို တည်ဆောက်လို့ မရသလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှု တစ်ခုတည်းနဲ့လည်း နိုင်ငံကို တည်ဆောက်လို့ မရပါဘုရား။
အမျိုးသားရေး အမြင် တစ်ခုတည်းနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တာ ကလောင်ကိုင်သမား တွေကြောင့်လား…..? လက်နက်ကိုင် သမားတွေကြောင့်လား ဘုရား…….?။
၇။ သတ္တလောက တခုလုံး အတွက် ပွင့်ပေါ်လာရတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ အမျိုးစောင့်မှုဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက် အယူရှိသူကို သတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ ထောင်ချပစ်ဖို့ ရန်သူလို သဘောထားဖို့ မဟုတ်တာ အထူးပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။
သတ်ဖို့ ဖြတ်ဖို့ ထောင်ချပစ်ဖို့ ရန်သူလို သဘောထားဖို့ ဘယ်ဘုန်းကြီးက ဟောနေလို့ပါလဲ ဘုရား…..?။
BBC.DVB လို ဘုန်းကြီးလဲ ကုလား သြဇာခံ ဖြစ်နေမယ်နော်။
အန္တရာယ်ကို အန္တရာယ်မှန်းသိရင် အန္တရာယ်ကင်းအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ဘုရား။ ရန်သူလို သဘောထားဖို့ ဟောကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့သာ ဟောကြားတာပါ ဘုရား။
ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ လိုပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ဆိုရင် အပြစ်ရှိသူကို အပြစ် ရှိသလိုတော့ ဆုံးမဖို့ လိုမယ်နော်…..။
ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် မုဒိမ်းကောင် ကုလားကို ထောင်ချမှ ဖြစ်မယ်။
လုံခြုံရေး အတွက် အဖျက်သမား ကုလားကို ထောင်ချဖို့တော့ လိုမယ်နော်……။
၈။ “အမျိုး ဘာသာ ကိစ္စမှာ ငါ့အမျိုးမှ အမျိုးဆိုတဲ့ အတ္တ အားကြီးသူတွေကို အားပေးမယ် မထင်ပါဘူး”
ဣဒမေဝ သစ္စံမောဃမညံထဲ ဝီရသူ မပါပါဘူး ဘုရား။
ဘာသာတရား ကိုးကွယ်တာနဲ့ ဘာသာတရားကို ကာကွယ်တာ မကွဲပြားသူတွေကတော့ ဝီရသူကို ကြည်ဖြူမှာ မဟုတ်ကြပါဘူး ဘုရား။
၉။ စောင့်လေမျိုးနွယ်နဲ့ သာကီဝင်တွေကို တန်ခိုးပြတဲ့ ဥပမာနဲ့ မပတ်သက်ပါ ဘုရား။
ဗုဒ္ဓဟာ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာရှင် တစ်ပါးပါ။
ဒါပေမဲ့ တိတ္ထိတွေကို တန်ခိုးပြပြီး နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိခဲ့ဖူးပါတယ်နော်။
၁၀။ “အမုန်း စကားတွေနဲ့ ဟောပြောပြီး တဖန် ငြိမ်းချမ်းရေးပါလို့ ပြောနေတာ မငြိမ်းချမ်းဘဲ မီးတောက်တွေသာ ပွားနေပါလိမ့်မယ်”
ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ကိုယ့်အင်အားကိုတော့ မဖြစ်မနေ ပြကိုပြရပါမယ်။
အနောက် နိုင်ငံတွေက စစ်အစိုးရ အပေါ် အင်အားပြခဲ့တာလဲ ဒီရည်ရွယ်ချက်ပဲ မဟုတ်လား…….?
Smart Power လို့ ခေါ်တယ်နော်။
မြန်မာပြည်သူတွေ ငတ်အောင် ပိတ်ဆို့တာကိုကျတော့ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး အားပေးခဲ့ကြပြီး ၉၆၉ကို ကျတော့ အမုန်းစကားတဲ့လား…….? ဘုရား။
၁၁။ အမျိုးစောင့် ဥပဒေကို ဘုန်းကြီးဆန္ဒနဲ့ ကန့်ကွက်လိုက ကန့်ကွက်ပါဘုရား၊ သံဃာထုကတော့ တစ်ခဲနက်ကို ထောက်ခံနေတာပါ ဘုရား။
“ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို ဘာသာရေး လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခတွေနဲ့ လမ်းပြောင်းဖို့ ကြံစည်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်”
အဲဒါလဲ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ အတွေးအခေါ် ဟောင်းကြီးပါ ဘုရား၊ အဓိကရုဏ်းတွေကြောင့် ပြောင်းလဲသွားသော နိုင်ငံရေးစနစ် မရှိခဲ့ဖူးပါ။
၁၂။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မတွဲစပ်ရဘူးဆိုတဲ့ စကားကို စစ်အစိုးရလဲ သုံးခဲ့ပါတယ်။ သံဃာတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ပါ။ အခုလဲ ဒီမိုကရေစီ ဆိုသူတွေက ထပ်ပြောနေကြပြန်ပါပြီ၊ သံဃာတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား…..?။
အဲဒီအယူအဆဟာ ဘုရား အလိုတော်မကျပါ ဘုရား။ ဘာသာတရားကို နိုင်ငံရေးမှာ အသုံးမပြုကြရင် အဲဒီ နိုင်ငံရေးဟာ လွတ်လပ် ပွင့်လင်း မှန်ကန် မျှတ ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါ့မလား ဘုရား။
သာသနာ့ အလံတော်ဆိုတာ လွတ်လပ်တယ်၊ ပွင့်လင်းတယ်၊ မျှတတယ်၊ မှန်ကန်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းတယ်၊ ဒါကြောင့် ဘယ်နိုင်ငံရေးမဆို သာသနာ့ အလံရဲ့ အရိပ်ကိုပဲ ခိုလှုံရပါမယ် ဘုရား။
ဘုန်းကြီးလည်း ဘုရားသားတော်ပီပီ သာသနာတော်ကို ဦးထိပ်ထားပါဘုရား၊ နိုင်ငံရေးကို သာသနာ အရေးထက် ဦးစားမပေးချင်ပါနဲ့ ဘုရား။ (ဒုတိယပိုင်း ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)ဟု မိန့်ကြားထားသည်။
အဆိုပါ မိန့်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာတော် ဦးဇ၀န (နိုင်ငံရေး အကျဉ်သားဟောင်းအား Tomorrow ဂျာနယ်မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်)၏ ပြန်ကြားချက် စာ-၂မှာ အဆုံးမသတ်သေးကြောင်း နောက်တစ်စောင် ထပ်မံရောက်ရှိလာဦးမည် ဖြစ်၍ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ၏ ဧပြီ၁၉ရက်နေ့တွင် ရေးသားထားသော ပြန်ကြားစာ-၂အတွက် ပြန်လည်ရေးသားဖို့ စောင့်ဆိုင်းရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုစာများမှာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ရေးသားနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည် မိန့်ကြားခဲ့သည်။